Faallo: Raysal wasaare Xasan Cali khayre Hawsha ug weyn waa inuu keeno xukumad wada shaqeyn karto | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Faallo: Raysal wasaare Xasan Cali khayre Hawsha ug weyn waa inuu keeno xukumad...
Faallo: Raysal wasaare Xasan Cali khayre Hawsha ug weyn waa inuu keeno xukumad wada shaqeyn karto
Raysalwasaaraha Jamhuuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta hortegey Baarlamaanka si ay u siyaan codka kalsoonida.
Kalfadhigga kowaad ee Baarlamaanka waxaa furey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo khudbad ka jeediyey xildhibaanadana ka codsadey in ay Raysawasaaraha siiyaan codka kalsoonida si loo dhaariyo xukuumaddana u soo dhiso. Markiiba waxa uu Raysal wasaare xasan cali khayre helay codka kalsoonida.
Waqti dheex ayaynen xukumadi shaqayn Waxaa laga suga yaa inuu si taxader leh u qiimeeyo awood Qayb siga beelaha ee Golaha wasiirada inaanuu ku dagdegin magacaabida Golaha Wasiirada. Marka
Hore aruuriyo fikirka
Sida aan wax ku Falanqeynayo waxaan shaki weyn kaqabaa in Wasiirada waqtigooda dhamaaday sidoo kale kamid ahaa Taageero weyn ka haysta Qabiiladooda lacagbaden haysta inay isku dayaan in ay kasoo dhax muuqdaan Xukuumada Cusub.
Hadey taasi dhacdo waa mushkilad weyn oo soofood saartey xukumada cusub ee uu hogaamiya Raysal wasaare xasan cali khayre
Waxaan aamin sanahay si wixii shakiya looga baxo waxaan u Rajeynayaa Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya xubnaha uu kusoo darayo golihiisa Wasiirada uu kusoo xusho kartida iyo aqoonta ay leeyihiin uuna tixgalin siin qabyaalad iyo nin jacleysi.
Waa muhiim in markasta la ilaaliyo xeerka dhaqanka siyaasaseed ee awood Qeysiga 4.5
Waxaan leeyahay ilahay ha ufudeeyo hawsha hortaal
Falanqeeyaa ka faalloda siyaasadda Soomaaliya
Previous articleDeg Deg: Baarlamaanka Soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansaxiyay Xasan Cali Khayre
Next articleAkhriso: khudbaddi Furitaanka kal-fadhiga koowaad ee Baarlamaanka